आरजुको नाम लिदै प्रधानमन्त्री देउवाले गरिदिए यसो खुलासा, नेताहरु सबै चकित — Imandarmedia.com
आरजुको नाम लिदै प्रधानमन्त्री देउवाले गरिदिए यसो खुलासा, नेताहरु सबै चकित
काठमाडौ। आरजुको नाम लिदै प्रधानमन्त्री देउवाले राखेको प्रस्ताव सुनेपछि कांग्रेस नेतहरु सबै चकित परेका छन्। प्रथम महिना तथा नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणालाई माननिय बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइडिया लगाएका छन्।
देउवाले सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुसँग प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्मै गठबन्धन गर्ने भए स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने अडान लिएका छन्। श्रीमती राणलाई जिताउन देउवाले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।
अघिल्लो चुनावमा काग्रेसका धेरै नेताले चुनाव हारेको आफुलेसमेत बल्लतल्ल चुनाव जितेको, प्रचण्डले हार्ने चुनाव लड्दैनन्, काग्रेसले नबोक्ने हो भने एमालेसँग मिल्न सक्छन्, जस्ता तर्क गरेर देउवाले गठबन्धनको आवश्यकता बारे बोलीरहेका छन्।
अघिल्लो निर्वाचनमा कैलालीमा एमालेका उमेदवार नारदमुनी रानासँग नमज्जा सँग पराजित भएकी आरजुले यस पटक जसरी पनि गठबन्धनमै चुनाव गर्न आफ्ना श्रीमान देउवालाई दबाव दिने गरेको स्रोतको दाबी छ।
पछिल्लो समय देउवाका श्रीमान श्रीमतीको एउटै स्वर सुनिन थालेको छ। केहि दिन अघि मात्रै कैलाली पुगेर देउवा पत्नी आरजुले गठबन्धन नगर्ने हो भने एमालेसँग प्रतिष्पर्धा गर्न कठिन हुने भन्दै गठबन्धनमै निर्वाचन हुने र आफु फेरी पनि कैलालीबाटै प्रतिष्पर्धा गर्ने बताएकी थिइन्।
श्रीमतीको दबावमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरु चुनावी गठबन्धनको पक्षमा छन् भने गगन थापा, डा. शेखर कोइराला लगायतका नेताहरु गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा छन्।
गठबन्धन नगरे कांग्रेसको हालत खराब हुने बुझाई प्रधानमन्त्री देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतको छ भने गठबन्धन गर्दा कांग्रेसलाई दीर्घकालिन रुपमा घाटा हुने बुझाई गगन थापा र डा. शेखर कोइरालाहरुको छ।
गठबन्धन नगरी चुनावमा जाँदा एमाले र ओलीले खर्लप्पै पार्ने डरले देउवा र रामचन्द्र पौडेलहरुमा घर गरेको छ। अहिले सत्तामा रहेका सहयात्री दलहरु माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतसँग चुनावी गठबन्धन नगरे ती दलसँग उल्टै ओलीले गठबन्धन गर्ने देउवाको बुझाई छ।
अहिले गठबन्धन नगरी चुनावमा जाँदा कम्युनिष्ट शक्तिहरु फेरि मिल्न सक्ने र कम्युनिष्टहरु मिलेको खण्डमा कांग्रेसको हालत अघिल्लो संसदीय निर्वाचनको झैं हुने डर प्रधानमन्त्री सहितका केही नेताहरुमा छ।
अघिल्लो पटक चुनावमा पराजित भएका कांग्रेसका अधिकांश नेताहरु गठबन्धनका पक्षमा छन्। ता कि अन्य दलहरुको वैशाखी टेकेर भएपनि चुनाव जित्न सकियोस् र सांसद बन्न पाइयोस्। रामचन्द्र पौडेल अघिल्लो पटकको संसदीय निर्वाचनमा पराजित भएका नेता हुन्।
गठबन्धन गरिएन भने यसपटक पनि चुनाव जितिँदैन भन्ने डर उनमा छ ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गठबन्धन नगर्दा व्यक्तिगत रुपमा आफूले डँडेल्धुराबाट चुनाव हार्छु भन्ने डर त नहोला तर, श्रीमति आरजु राणाको ठूलो चिन्ता छ।
कैलालीबाट चुनाव लड्ने रहर गरेकी श्रीमति आरजु राणा फेरी पछारिने हुन् कि भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री देउवामा देखिन्छ । श्रीमतिलाई जिताउँनका लागि नै भएपनि गठबन्धन गर्नपर्ने दबाबमा देउवा देखिन्छन्।
तेस्तै आफूले जित्नका लागि पनि गठबन्धन गर्नपर्ने लाइनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल देखिन्छन्। गगन थापा र डा।शेखर कोइरालाहरु तुलनात्मक रुपमा आफू सुरक्षित रहेको महसुस गरिररहेका छन्। त्यहीभएर उनीहरु गठबन्धनका पक्षमा छैनन्।
आफूहरुको अबस्था पनि रामचन्द्र पौडेल र आरजु राणाहरुको जस्तै भएको अनुभूति गगन थापा र शेखर कोइरालाहरुलाई हुन्थ्यो भने सम्भवतः उनीहरु पनि गठबन्धनकै पक्षमा देखिन्थे।
कांग्रेसका दुई महामन्त्री मध्ये गगन थापा गठबन्धनका विपक्षमा र विश्वप्रकाश शर्मा गठबन्धनका पक्षमा देखिनुलाई धेरैले नीजि स्वार्थका रुपमा लिएका छन्। संसदीय चुनावमा झापामा हारेका विश्वप्रकाश शर्मा गठबन्धन बेगर चुनाव लड्दा हारिने हो कि भन्ने डरमा छन्।
कांग्रेसका माथिल्लो तहकै एक नेता भन्छन्, कांग्रेसका अधिकांश नेताहरुलाई भोलिको कांग्रेसको होइन अहिलेको आफ्नो अबस्थाको पिर छ।चुनावको बिषयलाई लिएर कांग्रेशमा रडाको मचिएको छ।